Wasiirka arrimaha gudaha oo ku wajahan Cadaado – Radio Muqdisho
Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta ku sii jeeda degmada Cadaado ee gobolka Galguduud.
Socdaalka wasiirka ayaa qeyb ka ah diyaargarowga loogu jiro shirka maamul u sameynta gobollada dhexe oo ka furmaya degmada Cadaado.
Ergo ka socota Mudug iyo Galguduud ayaa sidoo kale ku qulqulaya degmada, ayadoo masuuliyiinta degaanku ay diyaarinayaan goobihii lagu shiri lahaa.
Ciidan ka tirsan howlgalka AMISOM ayaa gaaray degmada Cadaado si ay ammaanka uga gacan siiyaan ciidanka degaanka.
Madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa degmada Dhuusamareeb uga dhawaaqay in shirku uu ka furmi doono Cadaado, ayadoo dhawaan ay halkaas gaareen saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha iyo Federaalka oo ka shaqeynaya sidii taageero farsamo loo siin lahaa shirkan.